करिनाको कन्तविजोग : बाबाले आत्महत्या गरे, आमालाइ प्यारालाइसिस, बहिनीको शरिरमा गम्भीर रोग (भिडियो सहित) - Pabil News
कात्तिक २८ गते, २०७६ - ०२:२८
२७ कात्तिक, धादिङ /मनिष दुवाडी-
‘दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए, हे ईश्वर, दया राखी मलाई अझ दुख दे !’ प्रसिद्ध नाट्यकार बालकृष्ण शमको यो उक्ति नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १२ की करिना थापा मगरसंग ठ्याक्कै मेल खान्छ । एकातिर ३ वर्षदेखि प्यारालाइसिस भएर आमा लक्ष्मी थापामगर एउटै थलामा छिन्, अर्को तर्फ बहिनीको शरिरभरि अनौठो रोग छ । ज्याला मजदुरी गरेर भएपनि विहान बेलुकाको छाक टार्ने घरमुली नै आत्महत्या गरेपछि अहिले यो परिवार विचल्लीमा परेको छ ।
जन्मजातै बहिनीको जीउभरि रौँ र फोकै फोका थियो । उपचार गर्ने पैसा नभएर समस्या भइरहेको बेला आमालाइ प्यारालाइसिस भएर एउटै थलामा परिन् । आमाको उपचार गर्ने पैसो नभएपछि बाबाले आत्महत्या गरे । अहिले एउटै थलामा रहेको आमाको स्याहार सुसार र २ भाइबहिनीको पालपोषण गर्ने जिम्मा १२ बर्षिय करिनाको काँधमा आइपरेको छ ।
करिनाकी बहिनी सोममाया थाापामगरको शरिरमा देखिएको रोग
करिनाको बाबुले पनि लागेसक्दो नगरेका होइनन् । ज्यामा मजदुरी गरेर हातमुख त जोरेकै थिए तर उपचार गराउन सम्भव भएन । एकातिर कान्छी छोरी गम्भीर विरामी त्यसैमाथी श्रीमतीको प्यारालाइसिस भएपछिको एउटै थला । करिनाका बाबु यमबहादुरले श्रीमती र छोरीको उपचारका लागि सक्दो प्रयास गरे, तर उपचार सम्भव भएन । डिप्रेसनको औषधी खाइरहेको यम बहादुरले पनि तीन बालबालिकाको भविष्य सोच्न सकेनन् नै, विरामीहरुको उपचार कसरी गर्ने भन्ने चिन्तै चिन्ताले गाँजेर बाच्ने आशा नदेखेपछि अभावमा र गरिवीसंग जुध्न भन्दा आत्महत्यालाइ रोजिदिए ।
मर्ने त मरेर गए तर पिडा र समस्या बाँच्नेहरुलाइ भएको छ । तीन वषअघिदेखि प्यारालाइसिस भएपछि ३३ वर्षीया लक्ष्मी थापा मगरको दिसापिसाव एकै ठाउँमा भएको छ । एउटै थलामा परेकी लक्ष्मीको स्याहार ७ वर्षीया सोममायाँ थापा मगर, १० वर्षीय काजी थापा मगर र १२ वर्षीया करिना थापामगरले गर्दै आएका छन् । उनीहरु बिहान उठेपछि ओछ्यान परेकी आमालाई गिलो भात बनाएर खुवाउने र आमाले सुरुवालमा गरेको दिसापिसाव धोइदिने गर्छन् ।
करिनाकी कान्छि बहिनीको पनि अनौठो रोग छ । शरिरका सवैजसो भागमा रौँ र कालो धब्बा छ भने ढाडभरि पानीका फोका जस्ता पौकै पोका रहेको छ । करिनालाइ उपचार गराउन कहाँ लाने भन्दा पनि विहान बेलुका भाइबहीनीलाइ कसरी खाना खुवाउने भन्ने चिन्ता छ । करिना अध्ययनरत विद्यालय साँकोष माविका शिक्षक नवराज सापकोटाले भने, ‘विद्यालय आउदा पनि भोकै आएको थाहा पाएपछि विद्यालयका शिक्षकहरु मिलेर केही रकम जुटाएर तत्कालको खाद्यान्न समस्या टारेका छौँ, अरु समस्या कसरी समाधान गरिदिने ।’
यम बहादुरले आत्महत्या गरेको ७ दिन भयो । अभाव गरिवि र पिडा संग जुध्दै ज्यालामजदुरी गरेर विहान बेलुकाको छाक टारिरहेका यमबहादुरको आत्महत्या गरेपछि परिवारको गाँस नै बन्द भयो । केही समाजसेवी र करिना अध्ययन गर्ने विद्यालयले थोरै रकम संकलन गरेर तत्कालको अभाव त टारिदिएका छन् तर करिनालाइ आफ्नो भन्दा विरामी आमा र भाइबहिनीको चिन्ता छ । स्थानीय समाजसेवी दामोदर अर्यालले भने, ‘हामीले कतिदिन धानिदिऔँला र ? बालबालिकाको पढाइको पनि बन्दोबस्न गर्न सकिएला तर विरामी आमा र छोरीको उपचार कस्ले गरिदिने ? यस्तो गम्भीर समस्यामा परेका परिवारहरुको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ ।’
सरकारले स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार मौलिक हकमा व्यवस्था गरेर गरिवीका कारण उपचार अभावमा कोही मर्नु पर्दैन भनेपनि करिनाको परिवारलाई भने मौलिक हकले कहिँ कतै पनि छुन सकेको छैन ।
२०७६ कार्तिक २७ गते प्रकाशित